Zidane oo ka hadlay badalkii uu shalay ku sameeyay Ronaldo | TOP NEWS
Zidane oo ka hadlay badalkii uu shalay ku sameeyay Ronaldo
By Mohamed Abdulle Hassan on March 19, 2017 No Comment
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa si aan looga baran badal ku saaray xidiga xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo intii lagu jiray qaybtii danbe ee kulankii San Mames ee ay Real Madrid 2:1 ku soo garaacday kooxda Athletic Bilbao, waxaana markii uu kulankani soo dhamaaday Zidane wax laga waydiiyay sababtii uu Ronaldo badalka ugu saaray.
Ronaldo ayaa wali ku sii jira abaarta gool la’aanta garoonka San Mames waxaana garoonka laga saaray daqiiqadii 78 aad iyada oo lagu soo badalay Isco. Inkasta oo aanu Ronaldo wax gool ah ka dhalin kulankan waxa uu markii ugu horaysay kulan La Ligaha ah ka sameeyay laba gool caawineed tan iyo kulankii Eibar ee April 2016.
Zidane ayaa xaqiijiyay in waqtiba waqtiga ka danbeeya Ronaldo badal lagu saari doono isla markaana uu ku faraxsan yahay xaaladiisa wuxuuna yidhi: ” Ronaldo waxaa la soo saari karaa waqtiba waqtiga ka danbeeya, ma jirto wax badan oo laga sheegaa. Kaliya waxa uu isagu ku faraxsan yahay in aanu guulaysanay. Hadda iyo markale ayuu soo bixi karaa. Dhamaadkii waxaanu doonaynay in aanu isku dheeli tirno 4-4-2 “.
Zinedine Zidane ayaa Ronaldo ku amaanay in uu wax badan kooxdiisa ku soo kordhiyay kulankii Athletic Bilbao wuxuuna yidhi: “Intii ciyaarta lagu guda jiray Cristiano wax badan ayuu nasiiyay. Marka ay qasab kugu tahay in aad weerarka ku orodo in badan waa wax aad u dhib badan taasi waa sababta aanu u samayno badaladaas”.
Zidane oo ka hadlay badalkii uu shalay ku sameeyay Ronaldo added by Mohamed Abdulle Hassan on March 19, 2017